I-China Dongshen wholesale ilebuli yangasese yekhwalithi ephezulu yekhwalithi ethambile ye-silvertip badger hair resin isibambo sabesilisa eshefa ibhulashi lomkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
I-Dongshen wholesale label yangasese yekhwalithi ephezulu yekhwalithi ethambile ye-silvertip badger hair resin isingatha ibhulashi lokushefa lobuso labesilisa
I-Dongshen ibhulashi lokushefa likanokusho lenziwe ngezandla ngezinwele zemvelo zeSilvertip badger nesibambo se-resin. Isetshenziselwa ukuthambisa intshebe ngaphambi kokushefa, ngaphandle kokucasulwa esikhunjeni. Akukho ukulahleka kwezinwele, ukulahlekelwa kwesibambo, okwenza umngani wakho ohlala isikhathi eside enkambisweni yakho yokushefa yansuku zonke.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40, u-Dongshen uthuthukise amagiya okushefa amahle kakhulu emhlabeni kanye nezesekeli zokuzilungisa zamadoda zakudala. Besingumholi ekushefeni ibhulashi emisha kanye nokuklama, siqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu ngamunye ukhiqizwa ube sezingeni eliphakeme kakhulu.
Ifa lethu eliqinile nokufuna kwethu ukuletha imikhiqizo eyisibonelo kubonakala ekuzinikeleni kwethu ekwanelisekeni kwamakhasimende ethu ngayo yonke into enegama lethu.
Izinto ze-Knot Izinwele zebheji (izinwele ze-silvertip badger).
● Kwakha i-lather enhle ngensipho oyithandayo yokushefa. Izinwele zethu zePrimiyamu yidija esezingeni eliphakeme kakhulu, futhi ifindo lethu elenziwe ngezandla liyohlala iminyaka lapho linakekelwa kahle.
● Yomisa ibhulashi ngendlela efanele ukuze uthole ukusebenza nokusebenza kwebhulashi.
Izinwele zeSilvertip Badger
Ibhulashi lokushefa elibiza kakhulu kunawo wonke.Amabhulashi we-silvertip ayiqiniso anezeluleko ezimhlophe ezivuthayo, ezi-fluffy, ezivumela ukugcinwa kwamanzi kakhulu. Ngaso sonke isikhathi hlola eyodwa yalezi mabhulashi okushefa ngaphambi kokuthenga ukuze uqiniseke ukuthi uthola isivumelwano sangempela. Ngeshwa kujwayelekile ukuthi izinwele zebanga eliphakeme kakhulu zifakwe iblukwe ekugcineni kwayo ukuze zibukeke njengezinwele ze-silvertip. Ngenkathi zombili i-super badger ne-silvertip badger zingamabhulashi we-premium, i-silvertip badger yiyona ebiza kakhulu futhi ikanokusho ngenxa yokutholakala kwayo, ukushibilika nokugcinwa kwamanzi okuphezulu.
Ukunquma ukuthi ibhulashi linomthwalo weqiniso 'wesilvertip' udinga ukuhlola umbala wamathiphu we-bristle. Ibhulashi le-'silvertip 'langempela linamathiphu amhlophe qwa.
Akukho Okushefa Njenge-Dongshen - Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40 iDongshen ibe yisinqumo esisobala!
IDongshen inikeza ukukhethwa okubanzi kwamabhulashi okushefa okwenziwe ngezandla. Amabhulashi ethu ayatholakala ngezitayela ezahlukene nezinhlobo ze-bristle ukuhlangabezana nakho konke okuthandayo. Ubuningi nokuthamba kwama-bristles kunomthelela ekuqothulweni, ukuthi ibhulashi ligcina amanzi angakanani, kanye nobukhulu besikhumba esenziwe.
I-silvertip Badger Brushes ibanga elithambile kakhulu lebheji. Banamanzi amaningi futhi benza indwangu enhle kakhulu. Ama-shavers amaningi amanzi athanda amabhulashi we-silvertip badger ngenxa yokuthamba kwawo. Abanye bakhetha amamaki aqinile e-badger, ikakhulukazi labo abanesikhumba esibucayi.
Langaphambilini I-Dongshen ikhwalithi ephezulu yemvelo eqinile amabhande amabili ebheji lezinwele eziphatha isibambo sangokwezifiso samadoda ibhulashi lokushefa elimanzi
Olandelayo: Ibhulashi lokushefa le-Dongshen engcono kakhulu yezinwele zeblue blue resin phatha ilebula langasese usayizi wangokwezifiso webhulashi lokushefa labesilisa
Ukushefa Ibhulashi Silvertip
I-Dongshen 7pcs pink makeup brush isethwe ilebhu yangasese ...
Kwenziwe ngentando ilebula yangasese izimonyo eluhlaza ibhulashi isethi ...
Kwenziwe ngentando ilebula yangasese 12pcs wholesale rose r ...
Ama-8pcs e-eco-friendly 8pcs yemvelo yokubamba ukwakheka ...
I-Dongshen makeup brush yokwenziwa izinwele zensimbi yesandla ...
Dongshen izinga okusezingeni black plastic isibambo synt ...
Ukushefa Setha, Setha i-Makeup Brushes, isethi yokwenza ibhulashi, Yenza amabhulashi, Ithuluzi Brushes Brushes, Ukugunda Izinwele,